Vivaldi 2.9 inosvika ichiwedzera zvimwe sarudzo kumenu yayo | Linux Vakapindwa muropa
Mangwanani ano eHalloween, Vivaldi Technologíes yatanga Vivaldi 2.9. Iyo ndiyo yazvino vhezheni yewebhu bhurawuza yakagadzirwa neakare-CEO weOpera, yakavakirwa paChromium, iyo inouya nezvakawanda zvakawandisa zvinyorwa, pakati pazvo tine kugadzirisa mashandiro ayo anoita kuti kuvhura nekuvhara matabhu anzwe kuwanda, izvo zvinovandudza kwese kumhanya kweiyo browser. Kuvandudza kwakave kwakabatanidzwawo kune vashandisi muChina, Japan, neKorea.
Mune iyo rondedzero yenhau, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link, vakasimbisa iyo menyu shanduko (Zvaunofarira / Chitarisiko / Menyu). MuVivaldi 2.9 ivo vakavandudza mamenu mameseji nekuwedzera zvimwe sarudzo uye nekuchinjika, izvo zvinotibvumidza isu kuwana mabasa edu atinoda nenzira yakajeka uye nekukurumidza. Pazasi iwe une runyorwa rweakatanhamara mitsva maficha eVivaldi 2.9.
Vivaldi 2.8 inotevera matanho eChannel uye Firefox uye ikozvino inotibvumidza kuyananisa dhata neApple
Vivaldi 2.9 inosimbisa
Kuvandudza kwemenyu, kusanganisira zvinhu zvitsva:
Webhu Mapaneru - Akajairika Webhu Mapaneru anogona kuwanikwa kubva kumenyu iri pamusoro
Ratidza iyo tabhu bar: ikozvino tave kugona kuwana iyo tabo bar nekamwe chete kubaya, kana kutombozviviga.
Favorites: kana isu tichiona chatinoda chakanyorwa muVivaldi menyu, isu tinogona ikozvino kurudyi kwariri kuti tiwane mamiriro ezvinyorwa uye tiite zviito zvakasiyana.
Mhan'ara bhagi zvakananga kubva kumenu yekubatsira.
Kubvira kwekumisikidza mvumo yepasi rose yewebhu kubva Zvaunoda / mapeji eWebhu / Mvumo yekumisikidza.
Vhidhiyo inowedzera mune macOS, kusanganisira zvigadziriso zveHTML5 vhidhiyo yekutamba nyaya.
Yakagadziridzwa rutsigiro uye kushandiswa muChina, Japan neKorea.
Vivaldi 2.9 ikozvino iripo kubva Iyi link kwekuisa nyowani. Sezvo iyo Vivaldi repository ichiwedzerwa kana ichiiswa kekutanga, vashandisi veLinux varipo vanoona iyo vhezheni nyowani senge yekuvandudza munzvimbo yavo yekuparadzira software kana mune Software Gadziriso app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vivaldi 2.9 inosvika ichiwedzera zvimwe sarudzo kumenu yayo uye kugadzirisa mashandiro